Akwụkwọ kacha mma ugbu a
Akwụkwọ na isiokwu ndị dị ugbu a
Ọnwụ nke otu sapiens gwara onye Neanderthal
Ọ bụghị ihe niile ga-abụ ihe nri nri kpuru ìsì na ndụ. N'ihi na na maxim na-achị ihe niile, na premise na-egosi ịdị adị nke ihe naanị dabeere na ha na-emegide uru, ndụ na ọnwụ na-eme ka ndị dị mkpa kpuchie n'etiti onye ókè anyị na-aga. na ihe kpatara...
Obodo nke Ndụ, nke Nicola Lagioia
ọdịda agbata obi na-atụghị anya monstrosities. Ndị dọkịta Jekyll ndị nwere ike amabeghị na ha bụ Mr Hyde. Na mgbe ha dị, ọ bụghị na enwere mgbanwe ọ bụla. Ọ ga-abụ n'ihi okwu ochie ahụ nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ gị guzoro na njedebe "Abụ m mmadụ, ọ dịghịkwa ihe mmadụ bụụrụ m mba", n'ihi na ...
N'okpuru anya nke dragọn na-eteta, nke Mavi Doñate dere
Ịbụ onye nta akụkọ na-akwado isi ihe niile n'ịtụle onwe gị onye mere njem. N'ihi na ịkọ ihe na-eme n'ebe ọ bụla n'ụwa, ị ga-enwerịrị ihe ọmụma ahụ bụ isi iji kọwaa ihe na-eme na ntụkwasị obi. Nsonaazụ nwere ike ịbụ, dị ka nke a, a ...
Ndagwurugwu Haunting, nke Anna Wiener dere
Anyị niile chọrọ ndị otu hipster na geeks ndị ọzọ si Silicon Valley. Otu ụmụ nke nna nke kwupụtara usoro akụ na ụba ụwa ọhụrụ maka abamuru mmadụ niile ma gbadoro anya na ọdịmma ọha. Chi ọbụbọ nke ụwa teknụzụ ọhụrụ nwere uru ya dị ebube ...
The Stakes, nke Philipp Blom dere
Ojiji nke okwu a bụ "egwuregwu" na -egosipụta nke ọma ọhụụ ụwa anyị dị ka ihe na -adịchaghị adị. N'ihi na ihe niile bụ egwuregwu, anyị bụ ndị bi nwa oge ebe a, yabụ anyị enweghị ike were ihe ọ bụla kpọrọ ihe. Naanị, ọ dị nwute, etymology nke ...
Otu esi zere ọdachi ihu igwe, nke Bill Gates dere
Akụkọ a adịchaghị mma n'anya ogologo oge, ọbụnadị na ngalaba egwuregwu (ọkachasị maka onye na -akwado Real Zaragoza). Na, njakịrị n'akụkụ, okwu ijikọ ụwa ọnụ, mgbanwe ihu igwe nke nwa nwanne sayensị Rajoy gọnarị, na nke a na -enwe obi ụtọ na -atụgharị coronavirus ...
Mmiri Extremadura, nke Julio Llamazares dere
Enwere ndị edemede maka ihe na -eme n'ụwa nwere ọkwa dị iche, ogologo ntụgharị dị iche na nke mmetụta na nghọta ya na -emecha rute anyị. Julio Llamazares sitere na ụlọ ikpe nke ndị na -akọ akụkọ na -agba ọsọ na -egwu egwu ngwa ngwa ozugbo ha fesara anyị ...
Ndụ sapiens gwara Neanderthal, nke Juan José Millas kwuru
Ọ ga-abụ site na mkparịta ụka nke na-agwa ndụ ... dị njikere ikwu maka ịdị mma ...
Ebe ọ bụ na Lazarillo de Tormes anyị enweghị ike ịhụ akwụkwọ amaghị ama nwere nnukwu mmasị karịa nke a. Maka na agbanyere okwu ahụ ka ọ dị na ọnọdụ ụwa nke nwere anyị niile na tie piiiiii (ọ bụrụ akwa ma ọ bụ akwa). Site na ọrịa na -efe efe na ọkwa niile, mmadụ anọ ...